स्वस्तिमाले भनिन्, ‘बरु बुढो बोकेर हिडिन्छ तर तिम्रोमा अन्तरवार्ता दिन आईन्न’ – नेपाली सूर्य
स्वस्तिमाले भनिन्, ‘बरु बुढो बोकेर हिडिन्छ तर तिम्रोमा अन्तरवार्ता दिन आईन्न’
December 12, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on स्वस्तिमाले भनिन्, ‘बरु बुढो बोकेर हिडिन्छ तर तिम्रोमा अन्तरवार्ता दिन आईन्न’
केही दिन अघि एक अन्तरवार्ताका क्रममा नायीका पुजा शर्मालाई अनावश्यक टिप्पणी गरेका कारण विवादमा आएका संचारकर्मी प्रकाश सुवेदी फेरी विवादित भएका छन् । उनले संचालन गर्ने कार्यक्रममा उनले कलाकारलाई लिएर गर्ने तिखो टिप्पणीले उनी बारम्बार विवादित हुने गरेका छन् ।
कार्यक्रम रजतपटमा नायीका पुजा शर्मालाई शारिरीक बनावट प्रति ब्यग्यं गर्दै उनले गरेको टिप्पणी निकै विवादित भएपछि उनले सार्वजनिक रुपमा माफी मागेका थिए । त्यो घटना सेलाउन नपाउँदै उनले फेरी अर्की नायीका स्वस्तिमा खड्का प्रति ब्यंग्य गरेका छन् ।
आफुले कार्यक्रममा अन्तरवार्ताका लागि बोलाउँदा नआएपछि उनले कार्यक्रम मार्फत ति नायीका प्रति टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । नायीका स्वस्तिमालाई कार्यक्रममा अन्तरवार्ताका लागि बोलाउँदा नआएपछि उनले स्वस्तिमालाई काम नपाएकी नायीका आफ्नो बुढो बोक्यो हिड्यो भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।
नायिकाले लकडाउनका समयमा आफ्ना श्रीमान निश्चल बस्नेतलाई पिठ्युमा बोकेर हिडेको एउटा सानो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । सोही भिडियोको अंश आफ्नो कार्यक्रममा राखेर प्रकाशले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
प्रकाशले कार्यक्रममै यस्तो टिप्पणी गरेपछि स्वस्तिमाले पनि त्यसको जवाफ फर्काएकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसवुक मार्फत प्रकाशलाई गतिलो जवाफ दिएकी छन् । उनले फेसवुकमा लेखेकी छन्, बरु बुढो बोकेर हिडिन्छ तर तिम्रो कार्यक्रममा अन्तरवार्ता दिन आइन्न ।
उनको यो भनाईमा उनका पति निश्चलले पनि कमेन्ट गरेका छन् । बरु बुढो बोकेर हिडिन्छ तिम्रो कार्यक्रममा अन्तरवार्ता दिन आइन्न भन्छिन् नी मेरी बुढी भन्दै लेखेका छन् ।
इलामको जंगलमा फेला पर्यो विश्वकै दुर्लभ बाघ
७ करोड खर्च गरि इन्जिनियरिङ्ग कलेजका लागि तयार गरिएको भब्य भवनमा कुखुरा पालन सुरु !
चर्चित गायिका रचना रिमालको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागिन् उनी ? हेर्नु`होस्
August 16, 2021 August 16, 2021 Nepali Surya
मन्त्रीले ब’ल’त्का’र गरेको मलाई थाहाँ छैन, मन्त्री र मेरो बाबु छोरीको सम्बन्ध रहेको छ ( भिडियो सहित)
September 2, 2021 September 2, 2021 Nepali Surya
बिहानै पुरै रोड बन्द ज्ञानेन्द्र शाहीको ठूलो अड़ान MCC खारेज नहुन्जेल अनसन बस्ने सक्दो सेयर गरौ (हेर्नुहोस भिडियो)
August 22, 2021 Nepali Surya